Arsenal Oo Labba Cayaaryahan Lasoo Saxiixaneysa, Aguero Oo Messi Kula Middoobaya Barca & Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa Maanta – Garsoore Sports
Arsenal Oo Labba…
Maalin wanaagsan aqriste.
Suuqii bishii Janaayo ee kala wareegga cayaartooyda ayaa ugu dambeyay suuqa kala-iibsiga cayaartooyda, hayeeshee xagaaga ayuu furmayaa suuq weyn oo cayaartooyda la isku dhaafsado, inta kasokeeysa lama joojinayo xanta ku aadan cayaartooyda lala xiriiriyo kooxaha iyadoo kooxaha ay isku diyaarinayaan suuq biseyl ah oo ay u kala cad yihiin cida ay tahay inay bartilmaameedsadaan halka qaarna ay heshiisyo horudhac ah lasii gaarayaan cayaartooyda.
Haddaba halkan kaga boggi wararkii ugu dambeeyay ee suuqa maanta oo ay warbaahinta qoreyso.
Weeraryahanka reer Portugal Cristiano Ronaldo, oo 36 jir ah, ayaa matalaya “mustaqbalka” Juventus, sida laga soo xigtay agaasimaha kooxda Serie A, Fabio Paratici. (ESPN)
Barcelona ayaa ku sii dhawaaneysa heshiiska ay kula soo saxiixaneyso weeraryahanka Manchester City Sergio Aguero balse heshiiska 32 jirkaan oo si bilaash ah ku imanaya xagaaga ayaa ku xirnaan doonta in kooxda ka dhisan Nou Camp ay ku qancin karto weeraryahanka kale ee reer Argentina Lionel Messi, oo 33 jir ah, inuu la joogo iyaga. (AS)
Tababaraha Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ayaa laga yaabaa inuu iska diro 28 jirka Khadka-dhexe ee reer England Jesse Lingard, 32 jirka reer Spain Juan Mata, 21 jirka daafaca reer Portugal Diogo Dalot iyo daafaca Ingiriiska Phil Jones oo isna 29 jir ah, si uu ugu daro miisaaniyadiisa suuqa ee xagaaga. (Metro)
Wolves ayaa Liverpool ka heli doonta 12 milyan ginni xagaagan taasoo qeyb ka ah heshiis keentay in weeraryahanka reer Portugal Diogo Jota uu ku biiro kooxda ka dhisan Anfield bishii September. (Telegraph )
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Mareykanka Christian Pulisic oo lala xiriirinayo Manchester United iyo Liverpool, ayaa doonaya inuu u dagaallamo booskiisa Chelsea. (Fabrizio Romano via Express)
Manchester City ayaa dabagal ku heysa daafaca kooxda Sporting Lisbon Nuno Mendes si ay saxiixiisa uga dulqaadaan kooxda Real Madrid oo xiiseeyneeysa 18 jirkan Burtuqiiska ah.(AS, oo loo marayo Mail)
Arsenal ayaa xiiseeyneeysa daafaca kooxda Eintracht Frankfurt ee dalka Faransiiska Evan N’dicka oo 21 jir ah, waxaana sidoo kale lasoo wariyay in ay codsatay in lagusoo wargeliyo xaalada 24 jirka Mali u dhashay iyo kooxda Brighton Yves Bissouma. (EXPRESS)
Weeraryahanka kooxda Inter Milan Lautaro Martinez oo 23 jir ah ayaa kalsooni ku qaba inuu heshiis cusub u saxiixo kooxdiisa, inkastoo uu kooxda reer Talyaani ku tilmaamay mid wajahaysa xaalad dhaqaale. (Sky Sports)
Sidoo kale kubbad-sameeyaha xulka Denmark u dhashay ee Christian Eriksen oo lala xiriirinayaa inuu ka tago kooxda Inter bishii suuqii bishii Janaayo ayaa sheegay in uu ku faraxsanyahay joogitaanka kooxda. (Football Italia)
Chelsea ayaa ku dooneeysa ugu yaraan 20 Milyan oo Euro si ay isaga iibiyaan daafacooda Talyaaniga u dhashay ee Emerson Palmieri , iyadoo Inter iyo Napoli ay xiiseeynayaan. (Calciomercato, via Football Italia)
Aabaha dhalay da’yarka Barcelona Ilaix Moriba ayaa sheegay inuu kansalay diyaaradii wiilkiisa u kaxaynaysay Manchester markii uu 18 jirkan qarka u saarnaa inuu sannadkii 2019ki ku biiro kooxda Manchester City. (Sport)
CAJIIB: Goolkii Lamela Ee Lugo Isdhaafka Ahaa Kulankii Arsenal Oo Taariikhda Galay Balse Ma’ahan Kiisii Ugu Wacnaa Goolasha Rabona Loo Yaqaano